फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा छुट्टै विशेषता छ आरोन फर्निचरको [भिडिओ सहित ] - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
मंसिर २० गते २०७८
# मुद्रा विनिमयदर
# अमेरिकी डलर
फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा छुट्टै विशेषता छ आरोन फर्निचरको [भिडिओ सहित ]
२०७७ माघ, १४ बुधवार
फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा नेपालीको छनोट बदलिन थालेको छ । बदलिदो संस्कृति र जीबनशैलीका कारण उच्च गुणस्तरका प्रडक्टहरुप्रति मानिसहरु आकर्षित भएको पाइन्छ ।
ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव तथा बैदेशिक रोजगारीको प्रभावले पनि हुन सक्छ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने फर्निचर तथा फर्निसिङका सामानहरुमा ग्राहकहरु चुजी हुन थालेका छन् ।
अहिले कोरोनाको महामारी बीच पनि उभोक्ताहरु विस्वासिलो कम्पनीका सामान अनलाइनबाटै अर्डर गर्ने बानी परेको छ । होम डेलिभरि गराउनेहरु सेवा प्रदायक कम्पनीहरु बढेका छन् ।
बजारमा पछिल्लो समय आरोन फर्निचरका उत्पादनहरु तपाईको रोजाई हुन सक्छ ।
हेर्नुस् भिडिओ/ डाईरेक्टर -शालीग्राम बराल
सुरक्षित र भरपर्दो र विस्वासिलो तवरले ग्राहकहरुमा सेवा प्रवाह गरिरहेको आरोनले फर्निचर तथा फर्निसिङका सामानहरु तपाईको रोजाईमा उपलब्ध गराउँछ । उसले प्रतिस्पर्धी बजारमा ग्राहकहरु लक्षित गर्दै विभिन्न स्किमसमेत दिदै आएको छ ।
फर्निचर क्षेत्रमा छ वर्ष लामो आफ्नो अनुभवलाई अझै विस्वासिलो बनाउँदै लगेको छ । विशेष गरी आकर्षक कलर डिजाइनका पर्दा सोफा सेटहरु उपलब्ध गराउने उक्त कम्पनीले ग्राहकहरुका लागि अधिकतम सन्तुष्टि दिदै आएको छ ।
विशेष गरी शहरका मध्यमदेखि उच्चवर्ग लक्षित गर्दै आफ्ना उत्पादनहरु बजारमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । नेपालमा आवश्यक अधिकतम सामान आयातित छन् । जसले नेपाली पैसा विदेशिएको मात्र छैन । यहाँ युवाको श्रम र सीप खेर गएको छ । आरोन फर्निचर यहि आवश्यकता पूरा गर्न जन्मिएको हो ।
आरोनले केके सेवा प्रवाह गर्दछ ?
घर, कार्यालय, होटल, हस्पिटालिटीका लागि इन्टेरियर डिजाइन सेवासमेत उपलब्ध गराई आवश्यक सेवा प्रवाह गरिरहेको आरोन फर्निचर लामो समय विदेशमा आफ्नो सीप क्षमता पस्केर नेपालमै केही गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनी हो ।
मोडुलर किचन, विभिन्न अफिसियल तथा घरायसी फर्निचरका साथै पर्दा लगायत फर्निसिङका सामान पनि उपलब्ध गराउँछ।
आरोन फर्निचरका डाइरेक्टर राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ग्राहकहरूको रूचि र विशेषतालाई बुझेर उत्कृष्ट सेवा दिइरहेको छ । उनले भने ‘व्यक्ति व्यक्तिको रूचि, आवश्यकता, चाहानालाई हामी बुझ्छौं र वहाँहरुको इच्छालाई हामी पुरा गर्दछौं ।
कम्पनीले तयारी सामानको होम डेलिभरी सुविधा समेत दिएको छ । आरोनका फर्निचरहरू अत्याधुनिक प्रविधिबाट निर्मित भएकोले फोल्डिङ गर्न मिल्ने, सहज सरल र बलियो छ ।
उच्च कोटीको टेक्नोलोजीको प्रयोग र उत्कृष्ट डिजाइनमा बनाइएको हुनाले आरोनका प्रोडक्टहरू फिनिसिङ उत्कृष्ट, र आकर्षक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग तुलना गर्न सकिन्छ । बजारको भन्दा फरक खालका सामानहरु उत्पादन हुन्छन् ।
आधुनिक प्रविधि र डिजाइनरको सहायतामा आरोनले उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकले अवश्य महसुस गर्न सक्छन् । ग्राहकले चाहे जस्तै महसुस गराउन सक्ने अत्यन्तै फरक पहिचानसहित बजारमा स्थापित ब्राण्ड छ ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फर्निचरका समान
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फर्निचरका समानहरू पाइने भएपछि ग्रहकले आफ्नो खुशी महसुस गर्न सक्ने भएका छन् ।
बद्लिदो समय र आधुनिकतासँगै नेपालमा पनि फर्निचरका सामानहरू आकर्षक डिजाइन, उत्कृष्टता खोज्ने बानी नेपालीहरूमा छ ।
अझै शहरी करण बढ्दै जाँदा यस्ता समानहरूको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा विदेशबाट समेत अर्बौ रुपैंयाँको समान आयात भइरहेको स्थितिमा स्वदेशी उत्पादनले भरथेग गरी आयात रोक्न बल दिएको छ ।
कसरी सेवा लिने ?
करिब करोड रुपैयाँ माथि लगानी रहेको कम्पनी इमाडोल कमलपोखरीमा आफ्नै आउटलेट सोरुम छ । सिधा सम्पर्क गरि आउटलेट शोरुममा जान पनि सकिन्छ । वा कम्पनीको फेसवुक पेजबाट सिधै अर्डर गरी होम डेलिभरी गराउन सकिन्छ । कम्पनीका निर्देशक शालिकग्राम बरालले भन्छन्, ‘उत्पादनलाई अझै उत्कृष्ट डिजाईन र क्वालिटी दिने हाम्रो उद्देश्य हो । उपभोक्ताहरुको माग र अर्डर अनुसारका विभिन्न सयौं डिजाइनका सामान दिन सकिन्छ ।
घर, कार्यालय, होटललगायतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’कम्पनीले उत्पादन गर्ने सामग्रीमा प्रयोग हुने हार्डवयर ९चुक्कुल, कब्जा, ह्यान्डल आदि० मा १० बर्षको वारेन्टी दिएको उनले बताए । पार्टसहरु टेक्नोलोजीमा विश्व प्रसिद्ध मुलुक जर्मनबाट आयात गरिने निर्देशक बरालले बताए ।
त्यस्तै, कम्पनीले विशेष गरी मोडुलर किचन, फर्निचर र फर्निसिङका अफिसियल र घरायासी सामानहरु बजारमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउँछ।
# आरोन फर्निचर # बजार
आरोन फर्निचरको ‘चाडपर्व अफर’ शुरु, ग्राहकले १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट पाईने
‘नेपाल आइडल सिजन ४’को मुख्य प्रायोजक बन्यो कोका–कोला
सुनचाँदीको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रतितोला कतिमा खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ ?
रातो आलु प्रतिकेजी ४६, काउली ४०, गोलभेडा ११०, डल्ले च्याउ ३२५ र मुंगरी माछा २५० रुपैयाँ पर्ने, अन्य तरकारी र फलफूललाई कति ?
सुनचाँदीको मूल्य बृद्धि, प्रतितोला कति पुग्यो ?
आज काठमाडौँमा हरियो तरकारी, फलफूल, च्याउदेखि माछा र लसुन प्याजको भाउ कति होला ? हेर्नुस् मूल्यविवरण
स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिजले पायो उत्कृष्ट निर्यात कम्पनीको सम्मान
बाढीले बगाएर भारत पुर्याएको गैँडा उद्धार गरी ल्याइँदै
MetLife celebrates 20 years in Nepal
नेपाल स्काउटको संयोजकमा दाहाल, प्रत्येक विद्यालयमा स्काउट विस्तार गर्न मन्त्री अथकको निर्देशन
मेटलाइफ नेपालमा स्थापना भएको २०औँ वर्ष मनाउँदै,२५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी
Coca-Cola, The Title Sponsor of “Nepal Idol Season 4”
Stakeholders call for end to violence against women
आगामी तीन दिनको मौसम : आज देशभर बर्षा हुने, बुधबार र बिहीबार कुन क्षेत्रको मौसम कस्तो रहला ?
आज गोलभेडा, माछा, च्याउदेखि हरियो तरकारी र फलफूलको भाउ कति होला ? हेर्नुस् मूल्यसूची
नेपालमा दोहोरो चापीय प्रणालीको असर : आगामी तीन दिनसम्म कुन क्षेत्रको मौसम कस्तो रहला ?